အပိုလို ၁၃ - ဝီကီပီးဒီးယား
Apollo Lunar Module Aquarius မှ မြင်ရသော Service module Odyssey '​s
၄၅,၉၃၁ ကီလိုဂရမ် (၁၀၁,၂၆၁ ပေါင်)
၅,၀၅၀ ကီလိုဂရမ် (၁၁,၁၃၃ ပေါင်)
April 17, 1970, 18:07:41 UTC
လကမ္ဘာကို ဖြတ်၍ပျံသန်း (လှည့်ပတ်ပြီး ဆင်းသက်ခြင်းကိုဖျက်သိမ်း)
၂၅၄ ကီလိုမီတာ (၁၃၇ ရေမိုင်)
← အပိုလို ၁၂ အပိုလို ၁၄ →
အပိုလို ၁၃ (ဧပြီ ၁၁ - ၁၇ ၁၉၇၀) သည် အပိုလိုစီမံကိန်း၏ သတ္တမအကြိမ်မြောက် အာကာသတွင်း လူသားလိုက်ပါသောစီမံကိန်း၊ တတိယမြောက် လပေါ်သို့ဆင်းသက်ခြင်းရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သည့် မက်ရှင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကနေဒီ အာကာသစခန်းမှ ဧပြီ ၁၁ ရက် ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင် အာကာသယာဉ်အား ပစ်လွှတ်ပြီး service module ရှိ အောက်ဆီဂျင်လှောင်ကန်တွင် ယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သောကြောင့် လမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဆင်းသက်မည့်အစီစဉ်အား ဖျက်သိမ်းခဲ့ရသည်။ ယင်းအစား အပိုလို ၁၃ သည် လကမ္ဘာအား ဖြတ်ပျံသန်းကာ ကမ္ဘာမြေသို့ ဧပြီလ ၁၇ ရက်တွင် ဘေးမသီရန်မခဘဲ ပြန်ရောက်လာခဲ့သည်။
အောက်ဆီဂျင်ကန် ချို့ယွင်းမှုကြောင့် Command module ရှိ အာကာသယာဉ်မှူးများအတွက် အသက်ရှူရန် လိုအပ်သော အောက်ဆီဂျင်နှင့် လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက် အခက်အခဲရှိလာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အာကာသယာဉ်မှူးများသည် Lunar module သို့ ရွေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ရသည်။ Lunar module သည် လူနှစ်ယောက်အတွက် လမျက်နှာပြင်တွင် ၂ ရက်စာ ထောက်ပံ့ရန် ဒီဇိုင်းဆွဲထားခဲ့သော်လည်း ဟူစတန်ရှိ မက်ရှင်ကွပ်ကဲရေးက လူသုံးယောက်အတွက် ၄ ရက်စာ ထောက်ပံ့နိုင်ရန် အစီစဉ်ပြောင်းခဲ့သည်။ အဖွဲ့သားများသည် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသောအခြေနေများနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ အကန့်အသတ်ဖြင့် ပါဝါသုံးစွဲရသောကြောင့် အလွန်အေးသောဝေဒနာ၊ အဆင်သင့်သောက်နိုင်သောရေ ခက်ခဲမှု၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်စုပ်ယူပစ္စည်း အလုပ်ဖြစ်ရန် ခက်ခဲမှု အစရှိသော အခက်အခဲများ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ အပိုလို ၁၃ သည် အပိုလို စီမံကိန်းများထဲတွင် လူထု၏ အာရုံစိုက်မှုကို ရရှိခဲ့ပြီး တောင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွင် ဆင်းသောအခါ သိန်းချီသောလူများက စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသည်။
အပိုလို ၁၃ တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပြဿနာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အပိုလို ၁၄ တွင် မဖြစ်ပွားရန် ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ အပိုလို ၁၃ ၏ ဇာတ်လမ်းကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခဲ့ကြသည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ရိုက်ကူးခဲ့သော အပိုလို ၁၃ (ရုပ်ရှင်) သည် နာမည်ကြီးသည်။
↑ Apollo 13 CM။
↑ Orloff 2000, p. 309.
↑ Orloff 2000, p. 284.
↑ Orloff 2000, p. 307.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အပိုလို_၁၃&oldid=687472" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၃:၁၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။